IsiPheresiya 2019 October 23 3:43:23 Umbiko we-Bug Xhumana nathi Ama-Editions
Umshini Wokuphendula Ngezwi
Ungakwazi, ngokusebenzisa isigaba sosizo, uthole impendulo yemibandela yakho eminingi. Ukuze wenze lokhu, vele uthayiphe igama lakho noma ibinzana noma umbuzo kumkhakha wokusesha ngezansi, ukuze izimpendulo zihlelekile, ngoba Uzoboniswa
Uhlelo Lokusekela Oluhlakaniphile
I-smart system iyithuluzi lokusekela eliphelele kunazo zonke futhi eliphelele eliphendula izidingo zakho, imibuzo kanye nezicelo. Lolu hlelo, olufunda njalo nokuthuthukisa okuqukethwe kwakho ngokwenza inkhulumomphendvulwano nabasebenzisi abathandekayo, luzotholakala phansi phansi kwamakhasi onke ngezikhathi zonke.
Uma usebenzisa i-Smart Support System nganoma yisiphi isizathu, uma ungayitholi impendulo efanele, ungathayipha igama elithi opharetha futhi ufinyelele iphaneli yokuxoxa enkundleni, futhi osebenza nabo bazobe ku-intanethi ukuphendula imibuzo yakho.
Phakathi kwabo bonke abantu emphakathini, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza zesithunywa sekuye kwasakazeka. Yingakho, ukuze sikwazi ukusekela inqubo yokusekela, senze ama robot ngezinhlelo zokusebenza ezinhlanu ezithandwayo, ongazibuza imibuzo yakho. impendulo. Ngaphezu kwalokho, izintengo ezisheshayo kanye nezinthanethi zitholakala nazo ngalezi robotshi, ezibeka lezi zinkinga ukuhlangabezana nezidingo zakho ngokugcwele.
Ikholi Yezwi Ukuze kube lula ukuxhumana nabasebenzisi, inketho yekholi yezwi inikezwa kuwebhu. Ukuze usebenzise le nketho, chofoza nje inkinobho eluhlaza kusixhumanisi esingezansi noma ukusuka phansi kwekhasi ngakwesobunxele.
Umshini Wokuphendula NgezwiUma ungathanda, ungasitshela ukuthi yini oyicelayo ngomlayezo wezwi. Yonke imilayezo izwakala ekupheleni kosuku lokusebenza futhi bonke bazovela.
Izingcingo zomhlaba jikelele
Ama-imeyili thumela i-imeyili
info@tgju.org / UMnyango oPhethe
support@tgju.org / UMnyango wezokusekela
content@tgju.org / Umnyango wokukhiqiza
technical@tgju.org / UMnyango Wezobuchwepheshe
sales@tgju.org / Umnyango Wokukhangisa
design@tgju.org / UMnyango wezakhiwo
finance@tgju.org / Umnyango Wezezimali
admin@tgju.org / Ukuphathwa
Ingxoxo yeqembu le-Telegram
EUR/USD 1.113 (0.02%)
GBP/USD 1.2876 (0.16%)
USD/JPY 108.37 (0.11%)
Gold 1,490.11 (0.16%)
Brent Oil 59.47 (0.25%)
Bitcoin 8016.7 (1.1%)